Ary ny fahari-pon’ny Tompontsika dia ekeo ho famonjena, tahaka ny voasoratr’i Paoly, rahalahy malalantsika, taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy, tahaka ny ataony ao amin'ny epistily rehetra koa, fa milaza izany zavatra izany ao aminy izy; ary amin'ireo dia misy zavatra saro-pantarina, izay aolan’ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, tahaka ny anaovany ny teny sasany amin'ny Soratra Masina koa, ka mahatonga fahaverezana ho an 'ny tenany.» — 2 Pet. 3:15,16.
Azo antoka fa hanao zava-mahagaga ho antsika ny Tompo, raha toa ka mangetaheta sy noana ny fahamarinana isika. Fananana novidin'i Jesôsy Kristy isika. Tsy tokony ho verintsika velively ny fanoloran-tenantsika sy ny fanokanana antsika. Eo amin'ny fanoherana ireo fahadisoana sy ireo hevi-diso no toerana misy antsika, dia ireo fahadisoana sy hevi-diso izay tokony hofafana ao an-tsain'ireo izay tsy niaina araka ny fahazavana, izay efa noraisiny rahateo. Ny fahamarinana ara-Baiboly irery ihany no hany fiarovana ho antsika.
Fantatro ary tsapako tokoa fa ilaintsika ny ho tafaorina amin'ny finoana sy amin'ny fahazavan'ny fahamarinana izay nomena antsika tamin'ny fanandramana fony voalohany indrindra. Nanomboka tamin'izany dia nisy fahadisoana iray niampy iray hafa izay nanery antsika, ary tonga ireo mpiasa maro sy mpitsabo izay nitondra foto-pampianarana vaovao. Tokony hikatsaka ny Soratra Masina ombam-bavaka isika, ka ny Fanahy Masina no hampitoetra ny fahamarinana ao an-tsaintsika. Indraindray aza ny alina manontolo dia mety ho voatokana handinihana ny Soratra Masina sy hangatahana lalina ao am-po ny fitarihan'Andriamanitra. Ireo sakaiza mafana fo, lehilahy sy vehivavy feno fanotoran-tena, dia mivondrona ho amin'izany tanjona izany. Nirotsaka tamiko ny herin'Andriamanitra ka nampahiratina mazava ny saiko hahay hanavaka ny marina sy ny diso.
Koa rehefa miorina mafy ny finoantsika, dia ho tafajoro eo amin'ny fototra mafy tsy azo hozongozonina ny tongotsika. Teo ambany fanehoan'ny Fanahy Masina, dia nanaiky ny fahamarinana isam-pitsipika isika. Nampahitana fahitana aho ary naseho ahy ireo fanazavana maro. Nomena ahy ny fanehoana an-tsary ny zavatra any an-danitra sy ny fitoerana masina, ka nahatonga antsika ho tafatoetra eo amin'izay hiposahan'ny hazavana ho amintsika amin'ny alalan'ireo taratra mazava sy miavaka.
Voarakitra ao amin'ny asasoratro avokoa izany fahamarinana rehetra izany. Ny Tompo tsy manda ny teniny na oviana na oviana. Mety ho tafajoro manoloana ireo fandaminana maro mifandimby ny olombelona, kanefa ilay fahavalo kosa dia hikatsaka hatrany ny haka fanahy ireo fanahy maro hiala amin'ny fahamarinana. Saingy izay rehetra mina fa ny Tompo no niteny tamin'ny alalan'ny anabavy White sy nampitondra azy ny hafatra, dia ho voaro amin'ireo hevi-diso maro izay hiseho amin'izao andro farany izao. - MsR, lah. 760, U. 22,23.